ငစနရေဲ့ အပအေတမှေတျတမျးမြား: December 2007
မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ Christmas နဲ့ နှစ်သစ်ကူး ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မောင်စနေတစ်ယောက်တော့ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ ရွာရိုးလျှောက်ဦးမှာမို့ နောက်နှစ်ကျမှပဲ ပြန်လည်ဆုံဆည်းကြပါစို့ဗျာ။ ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်း၊ ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေတော့ ရလောက်ပါရဲ့။
written by ငစနေ at 11:05 AM
ကိုသခင်ကြီးက Native Myanmar Forum မှာ weekly photo contest တစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ် ခေါင်းစဉ်က Colors ပါ။ အဲဒီ title လေး ဝင်ပြိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ ဒီပုံလေးဖြစ်လာပါတယ်။ “ရောင်စုံဘောလုံး” တဲ့။
written by ငစနေ at 9:58 AM
Bob Dylan ရဲ့ Knockin' On Heaven's Door ပါ။ ခံစားကြည့်ကြပါဦး။ Avril ဆိုထားတာကိုကြိုက်သလို ဒီ version ကလဲ ရသတစ်ခု ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ Guns N' Roses ရဲ့ original version ပါ။
written by ငစနေ at 8:49 AM
written by ငစနေ at 9:25 AM
written by ငစနေ at 10:58 AM
ကြွားပြီဗျို့။ မနေ့က စမ်းပြီးရိုက်လာတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်လိုက်ပြီ။ Tripod မရှိတော့ တစ်ချို့ပုံတွေက handshake နည်းနည်း ထိထားတယ်။ ညဘက် ရိုက်တဲ့ပုံတွေ အတော်ထိတာပေါ့။ နောက်တစ်ခေါက် tripod ဝယ်ပြီးမှပဲ အပီ ထပ်ရိုက်တော့မယ်။ အခု ရိုက်ထားတဲ့အထဲက ပြင်လို့ပြီးသလောက်ကို တင်လိုက်တယ်။ ပြင်တယ်ဆိုတာက cropping လုပ်တာတစ်ခုတည်းပါ။ ကျွန်တော်က lighting နဲ့ color ကို camera က ပေးတဲ့အတိုင်း ထားတာကို ပိုသဘောကျတယ်။ အားမနာ ပါးမနာ ဝေဖန်ကြပါ။
Durean ... Oops! sorry. I mean the Theater At The Bay!
Sparrow! ... or Chocobo for ppls who play Final Fantasy.
နဂိုလ်ကတည်းက တုန်ပြီး မှုန်သွားတာကို ထပ်ဝါးပေးလိုက်တယ်။ ဟီးဟီး
written by ငစနေ at 10:01 AM
မျောက် အုန်းသီးရတဲ့ဇာတ်လမ်းကို စသူမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါဂုရုကြီးကိုမောင်လှဖြစ်သည်။ တစ်ခါတုန်းက Forum တစ်ခုတွင် "What's in your bag?" ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်လေးအောက်၌ ကျွန်တော်တို့ အပြိုင်ကြွား အဲလေ .. အပြိုင်ရေးခဲ့ကြတုန်းက ကိုမောင်လှက သူ့အိတ်ထဲတွင် အုန်းသီးတစ်လုံးရှိကြောင်း ပြောရာ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်လေး ဦးနှောက်ခြောက်ခဲ့ရဖူးသည်။ နောက်မှ ထို အုန်းသီး ဆိုသောအရာမှာ prosumer digital camera တစ်လုံးဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့ရသည်။ ယခုမူ ငစနေတစ်ယောက် အုန်းသီးတစ်လုံးဝယ်လိုက်လေပြီ။ မျောက်အုန်းသီးရတော့ ဘာဖြစ်တုန်းဆိုတော့ အဲဒီအုန်းသီးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တော့တာပေါ့။ ခါကြည့်လိုက်၊ လှုပ်ကြည့်လိုက်၊ လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်၊ အထဲက အသံကို နားထောင်ကြည့်လိုက်၊ သစ်ပင်ပေါ်က ပစ်ချကြည့်လိုက် နဲ့ မြင်ယောင်သာ ကြည့်ကြပါတော့။
မျောက် အုန်းသီးရရင်တော့ အဲဒီလိုလုပ်တာပေါ့ဗျာ။ camera ကိုတော့ အဲဒီလို လုပ်လို့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။ အဲဒီတော့ ဟိုလိုလေး ရိုက်ကြည့်လိုက်၊ ဒီလိုလေး ရိုက်ကြည့်လိုက်၊ အပေါ်ကနေ စီးပြီးရိုက်လိုက်၊ အောက်ကနေ ပင့်ပြီးရိုက်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေတော့တာပေါ့ဗျာ။ ငစနေ့သူငယ်ချင်း Qwer Qwer ကတော့ အဲဒါ မျောက် အုန်းသီးရတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ မျောက်လက် စက်သေနတ်ရောက်တာ တဲ့။ တွေ့သမျှ မြင်သမျှ မဲမဲမြင်ရာ လျှောက်ပစ် လျှောက်ရိုက်နေလို့ဆိုပဲ။ သူလဲ ဘာထူးလို့တုန်း Canon S5 Prosumer ကြီးကိုင်ပြီး လျှောက်ပစ်နေတာပဲဟာ။
written by ငစနေ at 11:12 AM